Ivo vanokumbira kudzinga Google kubva kune gay kudada kufora | Linux Vakapindwa muropa
Vashandi veGoogle vanokumbira kudzinga iyo kambani kubva kune gay Pride march
Kutsamwira Google ndeyekusaita zvinopesana nehukadzi pachikuva cheYouTube
Ivo vanokumbira kudzinga Google kubva kune gay Pride kufora muSan Francisco. Chinhu chinoshamisa ndechekuti avo vanobvunza vashandi vekambani. Vashandi 129 vakasaina tsamba uye ivo vakaitumira kune varongi.
Mariri, zvinokumbirwa izvo Google inodzivirirwa kubva mukutora chikamu uye zita rayo rinodzimwae kubva pane runyorwa rwevatsigiri vemakambani eiyo 2019 edition.
1 Nei urikukumbira kudzinga Google kubva kuhukama hwekuzvitutumadza?
1.1 Iyo inokonzeresa
2 Mhinduro yevarongi
Nei urikukumbira kudzinga Google kubva kuhukama hwekuzvitutumadza?
Kune vashandi, kuzvipira kwekambani kumapoka eLGBTQ + ingori chiitiko chekudyidzana neruzhinji uye kuti mukuita hazvitore chero chiito chaicho kana vanhu ivavo vakaitirwa ruvengo kutaura uye kushungurudzwa pamapuratifomu eGoogle.
Isu tinoita chikumbiro ichi mushure mekufunga zvakanyanya dzimwe nzira. Tapedza maawa asingaverengeke tichikurudzira kambani yedu kuvandudza marongero nemaitiro ane chekuita nekurapwa kwevanhu veLGBTQ, vamiririri vevanhu veLBBT +, nekushungurudzwa uye kutaura kweruvengo kwakanangana nevanhu veLGBTQ +, paYouTube nezvimwe zvigadzirwa zveGoogle. Nguva dzese patinosundira shanduko, tinoudzwa chete kuti kambani icha "tarisa padhuze nemitemo iyi." Asi ivo havambo vimbisa kuvandudza, uye kana isu tikabvunza kuti riini gadziriso ichaitwa, isu tinogara tichiudzwa kuti tishivirire.
Tsamba yacho haireve kune chimwe chiitiko, kunyange vezvenhau vachifungidzira kuti yakakonzera Chii chakaitika na youtuber Carlos Maza.
Tarira: Mune yekutanga vhezheni vhezheni yechinyorwa Carlos Maza akanzi wezvematongerwo enyika kubva kuSpanish Vox bato. Handizive kuti nei ndakaita musangano iwoyo. Pamwe nekuti paive nechiitiko nemutambo iwoyo neYouTube. Ndinodya zvakanaka vakadaro mu Menéame, Carlos Maza ndeyeAmerican YouTuber. Zvirinani ndakanga ndisina kukanganisa kuti iye akanetswa nekuda kwehutano hwake hwepabonde. Kukumbira ruregerero kune vaverengi.
Vakasaina usatonge kutsiva nekambani, Google yakavaudza kuti nekuitumira vakatyora mutemo wekutaurirana weGoogle
Mutsamba yacho vanoita chikumbiro kune vanoronga:
Tinotenda kuti hatina imwe sarudzo asi kukumbira iwe kuti urambe kutadza kweGoogle kuita mutsigiro yenharaunda yedu nekumubvisira rutsigiro uye kusabvisa Google kubva kumiririri yepamutemo paPride parade. Kana imwe chikuva chepamutemo, YouTube, ichibvumidza kushungurudzwa, ruvengo uye rusarura kuvanhu veLGBTQ +, sangano harifanirwe kupa kambani chikuva chinochipa sekutsigira vanhu vamwe chete.
Pamusi wekupedzisira wechimakumi mashanu wemhirizhonga yeStonewall, pamhemberero yekuzvikudza iyo chirevo chinonzi "Zvizvarwa zveKuramba," tinokukumbira kuti ubatane nesu mukurwisa kudzvinyirirwa kweLGBTQ + paInternet, uye kudzorwa kwekodzero yedu yekuenzana tichitsigira hupfumi. mhedzisiro yemakambani. Kufora kwekutanga kwekudada kwaive kuratidzira, saka ikozvino ichi chinofanirwa kuve chimwe.
Zvisinei, chikumbiro hachina kubudirira.. Google ichave iri kufora mangwana. Mhinduro yepamutemo kubva kune varongi yaive:
Sangano redu rinokurudzira kutaurirana pachena uye neruremekedzo. Tinotenda kuzvipira kwenhengo dzemunharaunda idzo dzakasvika kwatiri nezvavanonetseka pamusoro peGoogle. Google neYouTube vanogona uye vanofanirwa kuita zvimwe kusimudzira uye kudzivirira iwo manzwi evakagadziri veLGBTQ + pamapuratifomu avo, uye takaona kuti Google inoda kuteerera kushoropodzwa uku uye iri kushanda kugadzira marongero akakodzera. Ivo vakaziva kuti vane basa rakawanda rekuita kusimudzira hurukuro ine rukudzo nekuchinjana mazano.
Google yaigara iri shamwari inofunga yesangano redu kwemakore akati wandei, uye munhoroondo yaive mubatsiri akasimba wenzvimbo dzeLBBTQ +. Google yakagara ichipa mabhenefiti akakosha kune vashandi vane pabonde-pabonde uye vanoita zvepabonde, uye vakaita chengetedzo yeruzhinji yakakosha, vachipokana nemitemo isina kukodzera yakanangana nenharaunda dzeLGBTQ, kunyanya vanhu vane transgender.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vashandi veGoogle vanokumbira kudzinga iyo kambani kubva kune gay Pride march
System Tar uye Dzorera - yakapusa backup script
Seva dzine machipisi zvinoenderana neISA RISC-V inogona kusvika munguva pfupi ...